Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 26)
Samsung waxay soo gabagabeyneysaa baaritaanka Note 7, waxay la wadaagi doontaa natiijooyinka bishaan
Bartamaha bishaan Janaayo, Samsung waxay daabici doontaa natiijooyinka baaritaanka sababaha keenay dhibaatada Galaxy Note 7.
Samsung Galaxy A Tilmaamaha Taxanaha ah iyo Taariikhda La Soo Bandhigayo oo La Shaaciyey
Waxaan horeyba u ognahay in bilowga bisha Febraayo aan la imaan doonno taxanaha Samsung ee Galaxy A oo leh laba moodel oo aad u xiiso badan.
Sawirada iyo muuqaalka fiidiyowga ee Motorola Moto X 2017 waa la sifeeyey
Laga soo bilaabo Motorola Moto X 2017 waxaan horeyba u haynay sawirro taxane ah iyo muuqaal fiidiyoow ah oo ina tusaya qaabkeeda, oo la mid ah midka Motorola Moto Z.
HTC Ocean Note ayaa dhawaan iman doonta iyada oo shaashad weyn iyo kaamiro leh, laakiin aan lahayn afduub maqal ah
HTC waxay u aragtaa Ocean Note-ka inuu yahay qalab tayo sare leh oo ay ku rajo weyn tahay inuu kaga fiicnaan doono Google Pixels shaashadda iyo sawir qaadista.
LG G6 wuxuu dhabarka ku haysan karaa galaas lacag la'aan ah
LG G6 waa terminaal la filayo inuu wax ka qabto dhaliilaha LG G5. Waxay lahaan laheyd galaas gadaal ah iyo lacag la'aan wireless.
Sawirrada BlackBerry Mercury ayaa sir ah
BlackBerry wuxuu rabaa inuu keeno BlackBerry Mercury oo ah taleefanka kumbuyuutarka muuqaalka nostalgic laakiin leh Android 7.0 Nougat.
Buugga isticmaalaha iyo qiimaha taxanaha Galaxy A 2017 waa la sifeeyey
Haddii aad rabto inaad ogaato qiimaha Galaxy A3, A5 iyo A7, oo lagu daray faahfaahino xiiso leh, waa inaadan ka maqnaan waxa aan gacanta ku hayno.
Ulefone Gemini ayaa imaan doona kahor barnaamijka Pro
Soo saaraha ayaa xaqiijinaya in Ulefone Gemini uu imaan doono ka hor Ulefone Gemini Pro, in kasta oo labada noocba ay lahaan doonaan nidaam kamarad gadaal ah
Dib u eeg Cheetah Cubot 2. CAJIIB !! Kaliya 126 Euros waa hadiyadda ugu fiican ee loogu talagalay Boqortooyada
Maanta waxaan kuu keenayaa dib u eegista fiidiyowga ee 'Cubot Cheetah 2', oo ah terminal Android ah oo aan jeclahay isla markaana aan kugula talinayo hadiyad ka timid boqorrada.
Samsung miyuu dhigi karaa taxanaha xusuusta oo sii deyn karaa nooc ka mid ah S8 si loogu beddelo?
Galaxy S8 wuxuu noqon karaa mid aad uga qiimo badan inuu noqdo midka kaliya, maxaa yeelay adoo soo bandhigaya 'S Pen' siyaado ahaan wuxuu ka koobnaan karaa suuqa xusuusta.
Shirkadda Huawei ayaa horay u iibisay 140 milyan oo taleefannada casriga ah sanadkii 2016
Huawei wax walbaba wuu u socdaa wuxuuna dhammeystirayaa sanad weyn isagoo ka ogaanaya ilo aan la aqoonsan inuu la kulmay himilooyinkiisii ​​ahaa 140 milyan
BLUBOO Maya Max, waa taleefan sideed-geesood ah ah oo loo yaqaan 'Mediatek phone' si loo tixgeliyo
BLUBOO Maya Max waa taleefan wax walba leh oo aan waxba ka maqnayn. Waa la iibinayaa maalmahan ciida masiixiga qiimo jaban.
Xiaomi Mi 6 waxaa la soo bandhigi karaa Febraayo 6
Haddii Xioami Mi6 la soo bandhigi lahaa Febraayo 6, mararka qaarkood bisha Maarso waxay ka bilaabi doontaa iibgeeda suuqa, sidaas darteed wuxuu noqon lahaa mid ka mid ah dhammaadka ugu horreeya ee ugu sarreeya
Sony wuxuu gali lahaa moodada 'no beels' dhinacyada dhinacyada leh Xperia XZ (2017)
Xog daadis ah ayaa ina tusaya ujeeddooyinka Sony ee loogu talagalay Xperia XZ (2017) oo leh dhinacyo bilaa beel ah oo ku biiraya isbeddellada hadda socda.
LG laba sharad layaab leh oo loogu talagalay maqalka
LG wuxuu ku soo bandhigi doonaa CES 2017 laba sharadood oo la yaab leh sida alaabooyinka ku xiran codka: afhayeenka la qaadan karo ee levitates iyo silsilad xiran
Kaaliyaha codka ee Samsung wuxuu ka shaqeyn doonaa dhamaan barnaamijyada u gaarka ah Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan doonaa kaaliyaha codka cusub oo awood u leh inuu xakameeyo dhamaan barnaamijyada hooyo ee horay loogu sii rakibo.
Samsung oo soo cusbooneysiin doonta taxanaha Galaxy A ayaa noqon doonta mid aan biyuhu ka madhnayn
Mid kale oo ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee taxanaha Samsung Galaxy A ayaa ah inuu noqon doono mid aan biyuhu ka imanayn sida aan maanta ognahay.
Sawirro qarsoodi ah oo laga helay Nokia E1 iyo D1C
Nokia waxay hore u haysatay laba nooc oo suurto gal ah oo leh Nokia D1C iyo Nokia E1 oo hada laga arkay sawiro taxane ah oo xaday.
Bixiyaha ugu horreeya ee LG G6 oo muujinaya naqshad la yaqaan ayaa la sifeeyey
LG G6 wuxuu imaan doonaa rubuca hore ee sanadka 2017 waxaana hada heysanaa muuqaal xasaasi ah oo muujinaya waxa naqshadiisu noqon doonto.
Xanta cusubi waxay muujineysaa in Samsung Galaxy S8 uu yeelan doono shaashad 6 and ah iyo 8GB oo RAM ah
Samsung's Galaxy S8 ayaa wali kujira wararka iyo xanta tooshka waxaana hada heysanaa mid kale oo wata 8GB RAM iyo shaashad 6 "ah.
HMD waxay rajeyneysaa inay soo saarto 5 taleefan oo Nokia ah Q2017 XNUMX
Nokia waxay la imaan doontaa repertoire xiiso leh waxayna lahaan laheyd 5 taleefan oo casri ah oo leh noocyo kala duwan rubuca sadexaad ee 2017.
LG G6 wuu imaan karaa waqti ka hor intii aan la filayn
Si looga gudbo guusha qarsoodiga ah ee 2016, shirkadda LG waxay qorsheyneysaa inay horumariso daahfurka LG G6 si ay hoggaanka uga qabato Samsung.
Kani waa Samsung Galaxy A5 ee 2017
Kadib xanta badan iyo daadinta, waxaan ugu dambeyntii arki karnaa Samsung Galaxy A5 cusub oo ay ugu mahadcelinayaan kuwan rasmiga ah ee rasmiga ah ee la helay
Huawei Mate 9 waxay dhalisay 85 tayada sawirka DxOMark
Huawei Mate 9 waxaa loo soo bandhigay inuu yahay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee ugu sarreeya si sawirro loogu qaado 85 dhibcood DxOMark.
Huawei waxay si rasmi ah u ballanqaadday inay cusbooneysiineyso Honor 8 illaa Nougat bisha Febraayo
Wixii loo ballanqaaday waa deyn maantana Huawei wuxuu caddeeyay in Maamuuska 8 uu yeelan doono cusbooneysiintiisa Nougat bisha Febraayo oo ah ballan weyn.
27-ka Diseembar waxaad heli doontaa dhammaan waraaqaha Xiaomi oo dhan oo lagugu soo bandhigi doono Maalinta Xiaomi
Marka laga reebo Xiaomi Mi MIX, waxaad iibsan kartaa inta ka hartay taleefanka Xiaomi maalinta Xiaomi ee lagu qabtay Dreami iyo Aliexpress
Xiaomi Mi S oo leh shaashad 4,6 ″ 1080p ah, Snapdragon 821 iyo 4GB oo RAM ah ayaa la sifeeyey
Taleefan yar ayaa lagu sifeeyay shaashad 4,6 ", Snapdragon 821 chip iyo 4GB oo RAM ah taasna waxay ka timid Xiaomi, markaa waxay noqoneysaa mid xiiso badan.
LG wuxuu ku dhawaaqay 5 Telefoon oo cusub oo K ah oo ay ku jiraan Stylus 3 oo leh Nougat
LG wuxuu ku dhawaaqayaa 5 telefoon cusub oo ka mid ah taxanaha K iyo Stylus 3. Laba ka mid ah waxay la yimaadeen Android Marshmallow saddexda soo hartayna waxay la socdaan Nougat.
Ulefone waxay keentaa isku aadka xiisaha badan ee Kirismaska
Ulefone ayaa bilaabay tartan loogu dabaaldegayo Kirismaska. Waana in soo-saaruhu uu dhex dhexaadin doono iibsadaha alaabtiisa Ulefone Metal
Zuk Edge, taleefanka casriga ee cusub ku dhowaad xuduud la’aan iyo Android 7 Nougat oo ka socda Lenovo
Lenovo waxay u heellan tahay ku dhowaad taleefannada casriga ah ee aan xudduudda lahayn oo leh Zuk Edge cusub, oo ah terminaal qurux badan oo awood badan, oo leh astaamo wanaagsan, iyo qiime aad u tartan badan
HTC waxbaa haysa January 12
HTC waxay la wadaagtay sawir yar oo dhacdadii 12-kii Janaayo ee ay ugu yeertay "U" (adiga) oo Ingiriis ah.
Faallo qoto dheer oo fiidiyoow ah oo Weimei We Plus 2 ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegis qoto dheer oo fiidiyoow ah oo ku saabsan Weimei We Plus 2, Terminaalka cusub ee shirkadda Isbaanishka ee doonaya inuu boos ka helo suuqa
Hada waad ka xakamayn kartaa muusikadaada Spotify taleefankaaga Samsung Gear S3
Maanta labada Samsung ee xiran, Gear S2 iyo Gear S3, waxay u oggolaanayaan xakamaynta muusikada ka socota Spotify.
LG Wada-hawlgalayaasha Apple iyo Google si loo horumariyo Guddiyada OLED ee la Koobayn karo
Isku soo wada duub xubnaha OLED waxay door muhiim ah ka qaadan karaan sanadka 2017 iyagoo og in LG ay heshiis la gashay Apple iyo Google.
Ma jiraan laba la'aan saddex, maxaa dhacaya haddii Samsung?
Samsung waxay ku siin kartaa dharbaaxada ugu dambeysa ee S8 inay raacdo isbedelka dhacdooyinka tan iyo markii uu muuqday Xiaomi Mi MIX, iyo maanta sharafka sharaf,
Tani waa Sharafta Sharafta leh afar dhinac oo qaloocsan
Haddii Samsung's Galaxy S7 gees uu ku sifoobo laba dhinac oo qaloocsan, Honor Magic wuxuu leeyahay afar dhammaad leh dhamaadkaas gaarka ah.
Hantidhowrka 'Magic's Honor' ayaa laga rogi karaa dhinacyada oo dhan
Si looga fogaado waxa ka mid ah Xiaomi Mi MIX iyo "geeska" ee Galaxy S7 iyo S6, Huawei berrito waxay soo bandhigi kartaa sharaf sharaf leh 4 dhinac oo qaloocan
Samsung waxay horay u sii rakibi doontaa Samsung Pay inta badan taleefannadeeda sanadka 2017
Samsung Pay waxaa horey loogu sii dhejin doonaa sanadka 2017 inta badan taleefannada astaamaha Kuuriya si loo dhigo ka hor soo bixitaanka lacagaha mobilada.
Cusbooneysiinta Android 7.0 Nougat ee LG G5 ayaa hadda laga heli karaa Spain
LG wuxuu ku dhawaaqay cusbooneysiinta Android 7.0 ee LG G5 kaas oo laga soo dejisan karo barnaamijka LG Bridge barnaamijka rasmiga ah.
Ma jiri doono nooc caadi ah, oo fidsan Samsung Galaxy S8
Samsung ayaa dhinac iska dhigaysa nooca taleefanka ee caadiga ah ee fidsan si ay diirada u saarto cirifka iyo "bilaa biladaha" a La Mi MIX ee Xiaomi.
Xiaomi Mi Electric mooto waa cusub ee shirkadda Shiinaha
Baaskiil "smart" ah oo koronto ku shaqeeya waa sheyga cusub ee ay soo saartay shirkadda Shiinaha ee Xiaomi, taasoo ay ugu magac dartay mootada Mi korontada wax ka yar $ 289.
Labada kamaradood ee Bluboo Dual iyo Oukitel U20 Plus ayaa waji ka waji u wajihi doona
Waxaan dib u eegeynaa kala duwanaanshaha qeexitaanka qaabeynta labada kamaradood ee Bluboo Dual iyo Oukitel U20 Plus.
Bluboo Dual, taleefan casri ah oo la awoodi karo oo leh laba kamaradood
Bluboo Dual waa taleefan dhamaadkiisu hooseeyo oo iskiis isku deynaya isbeddelka hadda socda ee casriga ah ee wata laba kamaradood.
ZTE wuxuu ku dhawaaqay barnaamijka horusocodka Android Nougat ee AXON 7
ZTE Axon 7 wuxuu sidoo kale ku biirayaa barnaamijyada beta ee loogu talagalay Android 7.0 Nougat adoo ku dhawaaqaya goor dhow inay soo galaan dadka isticmaala Mareykanka.
ZTE wuxuu soo bandhigayaa taleefanadiisa batteriga weyn: Blade A610s iyo A610 Plus
Haddii aad raadineyso terminaal leh madax-bannaanida batteriga weyn, mid ka mid ah labada ay soo bandhigtay ZTE, sida Blade A610s iyo A610 Plus, ayaa u qalma.
Sony wuxuu noqday soo saaraha ugu horeeya ee geeya Android 7.1.1
Haddii aad raadineyso taleefan leh cusboonaysiinta Android ee kuwii hore, waxaan kugula talineynaa inaad u tagto Sony; wuxuu dhawaan yeelan doonaa Android 7.1.1
Asus ZenFone 3 Zoom wuxuu dhex marayaa TENAA oo leh shaashad dhan 5,5 and iyo laba kamaradood oo gadaal ah
Asus ZenFone 3 Zoom waa taleefan kale oo lagu boodo labada kamaradood ee gadaal gadaal waxaana lagusoo bandhigi doonaa bisha Janaayo 4 CES.
Samsung's Galaxy S8 wuxuu yeelan doonaa shaashad aan lahayn bezels a la Mi MIX
Samsung Galaxy S8 waa terminaal yeelan doona muuqaal aad muhiim u ah: wuxuu yeelan doonaa shaashad dhan oo shaashad la'aan.
Samsung Galaxy S7 Pearl Black cusub ayaa ina xusuusinaysa casriga kale
Samsung ayaa maalmaha soo socda noo soo bandhigi doonta nooc cusub oo ka mid ah Galaxy S7, dhammaystir madow oo aad u sarreeya, S7 Pearl Black
Ugu dambeyntiina Galaxy S7 iyo S7 edge Nougat beta ayaa u beddelay TouchWiz Samsung Experience
Galaxy S7 iyo ege S7 ayaa helay Nougat beta kii ugu dambeeyay kaas oo magaca TouchWiz lagu badalay Samsung Experience.
Honor Magic "bezel-less" casriga ah ee lagu dhawaaqi doono bisha Diseembar 16
Smartphone fikrad ah sida Xiaomi Mi MIX waa waxa ay Huawei ku heyso sharaftiisa sharafta iyada oo aan lahayn beello la shaacin doono bisha Diseembar 16.
Furayaasha HTC 11, ama gudaha looga yaqaan HTC Ocean
HTC 11 wuxuu macnaheedu noqon karaa kahor iyo kadib shirkadda Taiwanese haddii ay awood u leedahay inay neefsato hawada cusub ee ay ku neefsatay Google Pixel.
LG G6 wuxuu noqon lahaa mid aan biyuhu xirin wuxuuna bixiyaa taageero ku-dallaca wireless-ka
Haddii aan ogaanno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Samsung Galaxy S8 maanta, waxay sidoo kale taabaneysaa LG G6 iyada oo ay taageereyso lacag-bixinta wireless iyo caabbinta biyaha.
Huawei ayaa bilaabi doonta 'fikrad' taleefan casri ah berrito iyada oo loo marayo astaanta sharaf
Berri waxaan la kulmi doonnaa wax lala yaabo oo ka socda shirkadda Huawei oo leh sumcaddeeda sharafta leh taleefan fikrad ah oo ay ku soo qaadan doonto waxoogaa warar ah
Samsung Galaxy S8 ayaa laga yaabaa inuu ka dhamaado 3,5mm codka codka iyo badhanka guriga
Samsung Galaxy S8 waxay lahaan doontaa waxyaabo khaas ah oo aad u daran, laakiin dhinaca kale waxay sameyn kartaa iyada oo aan la helin qalabka codka ee 3,5mm iyo badhanka guriga.
Meizu M5 Note hadda waa rasmi oo leh shaashad 5,5 ″ ah, 4GB RAM iyo batari 4.000 mAh ah
Meizu M5 Note waa terminal xiiso leh oo qiimo jaban leh oo leh shaashad dhan 5,5 "4GB RAM ah iyo 4.000 mAh baytari ah".
Android 7.1.1 waxay ku timaadaa qaab OTA ah Nexus oo leh saddex war oo xiiso leh
Android 7.1.1 hadda waxaa lagu heli karaa qaab OTA ah iyo muuqaal warshad loogu talagalay Nexus oo leh 3 war aad u xiiso badan oo aan ka faalloon doonno.
Xiaomi Lunar wuxuu hubiyaa tayada hurdadeena
Xiaomi waxay noo soo bandhigeysaa qalab aan horey loo arag. Qalab ilaaliya hurdadayada oo naga caawisa inaan si fiican u nasano. Sensor Hurdo Lunar
Telefoon casri ah 'Meizu' oo cusub ayaa ka daadanaaya dhinacyada qalooca
Curvy-ka waxaa mar labaad lagu arkay daadinta taleefan cusub oo qarsoodi ah Meizu. Waa dhinacyada oo dhan meesha aad ka heli karto qalooca.
Falanqaynta iyo aragtida Samsung Galaxy A5 2016
Falanqaynta fiidiyowga oo dhammeystiran iyo Isbaanishka Samsung Galaxy A5 2016, taleefan ka sameysan aluminium iyo muraayad qabow oo qiimahaas ka yar 300 euro
Waxaan tijaabinay Ulefone Tiger, waana jeclahay
Waxaan tijaabinay Ulefone Tiger cusub, oo ah taleefan casri ah oo wata astaamo aad u waaweyn iyo qiime aad u hooseeya oo aad u hooseeya. Taasi waa sax oo kuwani waa aragtideena
Galaxy S8 wuxuu sameyn lahaa iyada oo aan la helin laba kamaradood oo muuqaal ah oo lagu arko taleefannada kale
Hadda waxaa laga ogyahay ilo kale in Galaxy S8 ay ku bixin karto labada kamaradood ee gadaasha dambe.
Wasaqda ugu horreysa ee shirkadda 'Huawei' ku leedahay dib-u-billowgeeda nadiifka ah, P8 ayaa ka dhammaatay Nougat
Huawei wuxuu helay wasakhdiisii ​​ugu horeysay ee resume-kiisa nadiifka ah ee lagu xardhay sanadahan tartan meteoric ah oo loogu magacdaray Android.
Falanqaynta fiidiyowga oo buuxa iyo Isbaanishka Huawei Mate 9, taleefan naga yaabiyay kamaraddiisa tayada iyo awoodda leh ee leh nidaamka muraayadaha laba-geesoodka ah
Haddii aad leedahay OnePlus 3, waxaad horeyba uga heli kartaa Android 7.0 beta-ka furan
Kuwa doonaya inay ku dhiiradaan inay ku rakibaan beta-ka Android 7.0 Nougat on OnePlus 3, waxay horeyba fursad ugu heleen inay sidaas sameeyaan.
Waxaa lagu soo bandhigay Meizu M3X oo leh shaashad 5,5 ″ 1080p, Helio P20 iyo 4 GB oo RAM ah
Meizu M3X waa terminal udub dhexaad u ah oo soo bandhigaya 5,5 "shaashad Full HD ah, qalab Helio P20 ah iyo 3 / 4GB RAM ah labadiisa nooc.
Meizu PRO 6 Plus ayaa lagu shaaciyey shaashadda 5,7 ″ QHD, Exynos 8890 iyo dareeraha garaaca wadnaha
Meizu PRO 6 Plus ayaa hada si rasmi ah u leh shaashad 5,7 "ah, Exynos 8890 chip iyo garaaca garaaca wadnaha oo lagu daray dhameystir bir ah.
Android 7.0 Nougat wuxuu yimaadaa Sony Xperia X Perfomance
Android 7.0 Nougat wuxuu durbaba bilaabay inuu gaaro qalabka Sony Xperia X Perfomance si loo siiyo tallaalka bilowga inta ka hartay Xperia.
LG waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto 4 smartwatches cusub iyo nidaamka lacag bixinta
Afar smartwatches cusub iyo LG Watch Pay waa magacyada diiwaangashan ee loo maleynayo in la gashado iyo nidaamka lacag bixinta ee 2017.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa sababta qaraxyada Note 7 dhammaadka sanadka
Galaxy Note 7 wuxuu qabsaday cinwaannada ugu waaweyn Samsung sanadkii 2016, laakiin waxay ahaayeen kuwa taban. Waxaan ugu dambeyn ogaaneynaa sababta qaraxyada
Samsung Galaxy C7 Pro wuxuu la muuqdaa Snapdragon 626, 4GB RAM iyo 16MP kaamirooyin
Bisha Diseembar waxay umuuqataa midda ay Samsung tilmaamtay inay soo bandhigto Galaxy C7 Pro oo yeelan doonta Snapdragon 646 chip, 4 GB oo RAM ah iyo kamaradaha 16MP
Diisambar 6 waxay noqon kartaa taariikhda Android 7.1.1 Nougat ee Nexus
Google waxay dooneysaa Kirismaska ​​inuu kuugu yimaado gurigaaga si dhakhso leh cusbooneysiinta Android 7.1.1 ee ku imaan doonta Nexus bisha Diseembar 6.
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan karaa kamarad hore oo leh autofocus
Sida kamaradaha gadaal, kamaradda hore ee Galaxy S8 waxaa lagu gartaa inuu leeyahay autofocus ama diirada otomaatigga ah.
Kani waa sanduuqii ugu xumaa ee waligaa aad aragtay
OnePlus wuxuu sameeyay sanduuqii ugu yaabka badnaa, ugu qosolka badnaa iyo waalan ee aad hubaal ka arki doontid in muddo ah OnePlus 3T si aad ugu soo bandhigto Yurub.
ZTE waxay kaa dooneysaa inaad ka caawiso iyaga inay go'aan ka gaaraan magaca taleefannadooda casriga ah ee dadka badan soo iibsadaan
ZTE waxay awood u yeelatay inay qeexdo aalad xoogaa yaab leh oo lagu garto awooddeeda u hogaansanaanta. Hada wuxuu rabaa inaad ka caawiso magaciisa.
Samsung way u kala qaybsami kartaa laba si kor loogu qaado qiimaha saamileyda
Samsung ayaa qaadan doonta go’aanka berri oo Talaado ah inay u qaybiso laba si loogu daro qiimo dheeri ah qaybta casriga ah kahor saamileyda.
Bixinta fikradaha cajiibka ah ee 'ZTE Nubia' fikrad la'aan bilaa dhalaal ayaa soo baxaya
Waxay umuuqataa inaan wajaheyno xaqiiqo dhab ah taas oo ah taleefanada bilaa biraha ah ee ZTE ay kubiirto fikrada Nubia
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Samsung Gear S3 gudaha Spain
Laga bilaabo maanta waxaad marin u heli kartaa iibinta hore ee Samsung Gear S3 oo ugu dambayn la heli doono bisha Diseembar 1 Spain oo dhan.
Japan waxay yeelan doontaa taleefannada casriga ah ee loo yaqaan Star Wars Mobile
Jabbaan waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah labadan taleefan oo u dhigma doona dareenkaaga ku saabsan awoodda iftiinka xoogga ama mugdiga.
OnePlus 3 wuxuu helaa OxygenOS 3.2.8 oo leh 1080p 60fps duubista fiidiyowga iyo inbadan
Nooca 3.2.8 ee OxygenOS 1080 duubista fiidiyowga ee 60FPS waa la shaqeeyay waxaana "badhanka argagaxa" loogu daray Hindiya.
Noocyada furan ee HTC 10 waxay bilaabayaan inay helaan Android Nougat
HTC 10 wuxuu bilaabaa inuu si rasmi ah u helo cusbooneysiinta Android Nougat ee soo saarayaasha kale wali ku hayaan beta.
Shirkadda Nokia ayaa noqonaysa terminal awood badan
Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee 2017 oo lagu qaban doono magaalada Barcelona, ​​waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto calanka shirkadda Finland ee Nokia
Muuqaal cusub oo daaha laga rogay Meizu X oo leh laba kamarad oo dhinaca dambe leh
Meizu X wuxuu aadayaa qaabeynta kamaradaha labada geesood ah xaga dambe sida ka muuqata sawirka cusub ee la sifeeyey ee terminaalka.
Qiima dhimista waalida ah ee Ulefone ee bixin doonta berri Jimcaha Madow
Ulefone waxay qiimo dhimis gaar ah ku sameysaa dhammaan taleefannadeeda bisha Noofambar 25, oo ah maalin aan dhammaanteen u naqaanno Black Friday.
Xiaomi Mi MIX waxaa ku jira kaaliyaha Microsoft ee Cortana
Xiaomi Mi MIX waa taleefan aad u qaas ah shaashadaas bilaa biil, laakiin sidoo kale waa sababta oo ah waa mobile-kii ugu horreeyay ee aan Windows-ka lahayn ee leh Cortana.
Nokia-ka heerka cusub ee galaya ee Android ayaa ka muuqda Geekbench
Geekbench wuxuu bixiyay tijaabooyin kaladuwan oo telefishinada Nokia ah oo la arki doono bilowga sanadka MWC 2017 oo lagu qaban doono magaalada Barcelona.